Isixhobo sokulungisa i-Excel. Isoftware yokubuyisela i-Excel. Lungisa iiFayile ze-Excel.
DataNumen Excel Repair Ingaba i eyona Isixhobo sokulungisa kunye nokubuyisela kwakhona i-Excel emhlabeni. Inokulungisa ii-xls ezonakeleyo kunye neefayile ze-xlsx kwaye iphinde ifumane idatha yakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela inciphisa ilahleko kurhwaphilizo lwefayile.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,601)
Ngoba DataNumen Excel Repair?
Inqanaba lokubuyisela kwimeko yesiqhelo yimost Inqobo ebalulekileyo yemveliso yokubuyisela i-Excel. Ngokusekwe kuvavanyo lwethu olubanzi, DataNumen Excel Repair unelona zinga lifanelekileyo lokuchacha, ibhetele kakhulu kunaye nawuphi na umntu okhuphisana naye kwimarike!
Funda ngakumbi malunga nendlela DataNumen Excel Repair utshaya ukhuphiswano
M.S. Injineli yoMbane ePhakamileyo
Iindleko zezabelo NorTecnica Engineers Ltd.
DataNumen Excel Repair ndagcina usuku ndabuya ndafumana idatha endiyifunayo kwifayile yam eyonakeleyo. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, isebenze kakuhle kakhulu kum
Ulwazi malunga nenkampani PIN Technology, Inc.
ENew York, NY, eUSA
Isebenze kakuhle! Onke amagama am kunye nedatha yam (ekunokwenzeka ukuba inzima kakhulu) yokujonga kwakhona ngoku ibuyile! ENKOSI!! Ngexesha lasehlotyeni bendinalo
IBrownwood, eTexas, eMelika
Agasti 13th, 2014
Isixhobo sokulungisa i-Excel sikwazile ukukhupha yonke idatha yokubhaliweyo kwiifayile ezi-2 ezonakalisiweyo ze-Excel ebezivulekile kwaye zigcinwa xa ndinengozi ye-PC.
NgoJan 1, 2017
Isisombululo sokulandela iimpazamo eziqhelekileyo kunye neengxaki kwiFayile ye-Excel
I-Excel ifumene umxholo ongafundekiyo kwi "filename.xslx".
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen Excel Repair v3.6
Inkxaso yokulungisa ii-Excel xls, xlw kunye neefayile ze-xlsx kwi-Excel 3, 4, 5, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 365 kunye ne-Excel yeefomathi zeOfisi XNUMX.
Iifayile zenkxaso eziveliswe yi-Excel yeWindows kunye neMac.
Inkxaso yokufumana kwakhona idatha yeseli kwiifayile ze-Excel.
Inkxaso yokufumana kwakhona iifomula, kubandakanya ifomula ekwabelwana ngayo kunye nefomula efakiweyo.
Inkxaso yokufumana kwakhona iifomathi eziqhelekileyo kunye neefomathi zesiko kwiiseli kunye neefomula.
Inkxaso yokulungisa iifayile ze-Excel kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, efana nediski yediski, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa ibhetshi yeefayile ze-Excel.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa ii-xls kunye nefayile ye-xlsx kunye nemenyu yokuma yeWindows Explorer ngokulula.
Inkxaso yokwenza ukubuyiswa kwe-Excel ngokusebenzisa iiparameter zomgca wokuyalela.
usebenzisa DataNumen Excel Repair Ukufumana kwakhona iiFayile ze-Excel
Xa iifayile zakho zeMicrosoft Excel .xls, .xlw kunye .xlsx zonakele okanye zonakele ngenxa yezizathu ezahlukeneyo kwaye awukwazi ukuzivula ngempumelelo nge-Excel, ungasebenzisa DataNumen Excel Repair ukusombulula ingxaki. Iya kuskena ifayile eyonakeleyo kwaye ivelise ifayile entsha engenasiphoso.
Qaphela: Ngaphambi kokufumana kwakhona nayiphi na ifayile ye-Excel eyonakeleyo okanye eyonakeleyo nge DataNumen Excel Repair, nceda uvale naziphi na ezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile. Kwaye nceda uvale iMicrosoft Excel.
Khetha ifayile ye-Excel eyonakeleyo okanye eyonakeleyo eza kulungiswa:
Ungafaka igama lefayile ye-Excel ngokuthe ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile.
Ngokuzenzekela, DataNumen Excel Repair iya kugcina ifayile ye-Excel emiselweyo kwifayile entsha enegama le-xxxx_fixed.xls zefayile .xls kunye ne-xxxx_fixed.xlsx yefayile ye-.xlsx, apho i-xxxx ligama lefayile ye-Excel. Umzekelo, kwifayile ye-Excel eyonakele.xls, igama elingagqibekanga lefayile emiselweyo iya kuba yiDamaged_fixed.xls. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Excel Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa ifayile ye-Excel.
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba ifayile ye-Excel ingalungiswa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Ngoku unokuvula ifayile ye-Excel emiselweyo ngeMicrosoft Excel.
DataNumen Excel Repair 3.1 ikhutshwa nge-11 kaDisemba, 2020
DataNumen Excel Repair 2.9 ikhutshwa nge-2 kaNovemba, 2020
DataNumen Excel Repair 2.8 ikhutshwa nge-16 ka-Okthobha ka-2019
DataNumen Excel Repair 2.7 ikhutshwa nge-16 kaSeptemba, 2019
DataNumen Excel Repair 2.6 ikhutshwa nge-8 kaJuni, 2019
DataNumen Excel Repair 2.4 ikhutshwa nge-21 kaJanuwari, 2019
Inkxaso ye-Excel 2019.
DataNumen Excel Repair 2.3 ikhutshwa nge-20 ka-Agasti ka-2018
Inkxaso ye-Excel 2016 kunye ne-Excel yeOfisi 365.
Ukuphucula ukubuyiswa kweefomula.
DataNumen Excel Repair 2.2 ikhutshwa nge-24 kaDisemba, 2015
DataNumen Excel Repair 2.1 ikhutshwa nge-7 Septemba 2013
Inkxaso yokufumana kwakhona ifomula ekwabelwana ngayo kunye nefomula efakiweyo.
Inkxaso yokufumana kwakhona inani lefomathi yeeseli.
DataNumen Excel Repair 2.0 ikhutshwa ngoJuni 22, 2013
Inkxaso ye-Excel 2007, 2010 kunye neefomathi zika-2013.
DataNumen Excel Repair 1.4 ikhutshwa nge-23 kaMeyi ka-2005
DataNumen Excel Repair 1.2 ikhutshwa nge-10 kaFebruwari, 2004
Inkxaso yokufumana kwakhona iifomula.
Inkxaso yokufumana kwakhona amagama amaphepha okusebenzela.
DataNumen Excel Repair 1.1 ikhutshwa nge-5 kaNovemba ngo-2003
Ukuphucula isantya kunye nokuchaneka kokubuyiswa kwedatha.
Yenza umyalezo welog ube mfutshane.
DataNumen Excel Repair 1.0 ikhutshwa nge-5 ka-Agasti ka-2003
Inkxaso yokulungisa ii-xls kunye neefayile ze-xlw kuhlobo lwe-Excel 3, 4, 5, 95, 97, 2000, XP, 2003.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa iifayile ze-xls kunye nemenyu yokuma yeWindows Explorer ngokulula.